Anisan'ireo Microsoft Corporation androany, ny vidin'ny MSFT tahiry amin'ny aterineto izao, mizara ny vidin'ny Microsoft Corporation.
MSFT = 299.84 US dolara
+3.13 USD (+1.04%)
Ny fiovan'ny vidin'ny tahiry Microsoft Corporation in US dolara mitranga isan'andro. Ny vidin'ny stock stock dia manana sanda iray isan'andro. Fampahalalana momba ny taham-bidin'ny tahiry. 1 stock of Microsoft Corporation dia 299.84 stock of US dolara. Ho an'ny tahiry 1 avy amin'ny Microsoft Corporation izao dia mila mandoa 299.84 stock of US dolara. Nisondrotra ny tahan'ny Microsoft Corporation nanohitra ny US dolara nataon'i 105 zato heny tamin'ny isa isan-jato.
Microsoft Corporation ny lanjan'ny orinasan'ny orinasa US dolara
Iray volana lasa izay, ny vidin'ny Microsoft Corporation dia azo vidiana ho an'ny 341.95 US dolara. Enim-bolana lasa izay, ny Microsoft Corporation dia azo ovaina amin'ny 284.91 US dolara. Herintaona lasa izay, ny Microsoft Corporation dia azo atakalo ho an'ny 239.51 stock of US dolara. Ny saram-bolan'ny Microsoft Corporation ao amin'ny US dolara dia azo jerena ao amin'ny tabilao. Ny fanovana ny vidin'ny tahiry Microsoft Corporation ao amin'ny US dolara ho an'ny herinandro dia 1.29%. Nandritra ny taona dia ny Microsoft Corporation ao amin'ny US dolara ny vidin'ny tahiry novaon'ny 25.19%.
Stock quotes Microsoft Corporation US dolara
MSFT Ny US dolara (USD)
1 MSFT 299.84 US dolara
5 MSFT 1 499.20 US dolara
10 MSFT 2 998.40 US dolara
25 MSFT 7 496 US dolara
50 MSFT 14 992 US dolara
100 MSFT 29 984 US dolara
250 MSFT 74 960 US dolara
500 MSFT 149 920 US dolara
Raha manana 10 stock of Microsoft Corporation, dia ao amin'ny ny British Virgin Nosy azonao atao ny mividy 2 998.40 US dolara. Azonao atao ny mifanakalo 7 496 US dolara ho an'ny 25 stock of Microsoft Corporation. Azonao atao ny mivarotra ny 50 stock of Microsoft Corporation ho an'ny 14 992 US dolara. Androany, ny 100 stock of Microsoft Corporation azo amidy ho an'ny 29 984 US dolara. Ankehitriny, 74 960 US dolara azo atakalo ho an'ny 250 stock of Microsoft Corporation. Azonao atao ny mifanakalo 500 stock of Microsoft Corporation ho an'ny 149 920 US dolara.
MSFT tantara momba ny vidin'ny stock
27/01/2022 299.84 USD 3.13 ↑
26/01/2022 296.71 USD 8.22 ↑
25/01/2022 288.49 USD -7.88 ↓
24/01/2022 296.37 USD 0.34 ↑
21/01/2022 296.03 USD -
27 Janoary 2022, 1 stock amin'ny Microsoft Corporation = 299.84 US dolara. 26 Janoary 2022, 1 stock amin'ny Microsoft Corporation = 296.71 US dolara. Microsoft Corporation in US dolara amin'ny 25 Janoary 2022 dia mitovy amin'ny 288.49 US dolara. 24 Janoary 2022, 1 stock amin'ny Microsoft Corporation vidiny 296.37 US dolara. Ny farafahakeliny MSFT / USD vidin'ny taham-bolana ho an'ny volana lasa dia ny 25/01/2022.
Anisan'ny Microsoft Corporation ny iray amin'izao fotoana izao amin'ny 299.84 $. Ny vidin'ny MSFT dia niova ho +1.04% na +3.13 USD hatramin'ny andro iraisam-barotra farany. Azonao atao ny mividy entana 100 Microsoft Corporation amin'ny 29 984 US dolara na mivarotra 50 isa amin'ny MSFT amin'ny 14 992 US dolara.
Microsoft Corp dia orinasa teknolojia.Manangana, lisansa, ary manohana ireo vokatra sy serivisy isan-karazany. Ny raharaham-barotra dia voalamina amin'ny sehatra telo: Productivity and Business Processes, Cloud Cloud, ary Personal Computing.